११ वर्षीय युक्रेनी बालक एक्लै १ हजार किलोमिटर हिंडेर छिमेकी देशमा पुगे ! विश्वभरबाट पाए नायकको सम्मान – Cn Chautari
फागुण २४, २०७८ मंगलबार 215
११ वर्षीय युक्रेनी बालक ।
एक्लै १ हजार किलोमिटर हिंडेर छिमेकी देशमा पुगे ! विश्वभरबाट पाए नायकको सम्मानयुक्रेनमा रुसी यु-द्धमाझ एक ११ वर्षीय युक्रेनी बालक एक्लै १ हजार किलोमिटर यात्रा गरेर छिमेकी स्लोभाकिया पुगेका छन् ।
आमाको नोट र आफ्नो हातमा टेलिफोन नम्बर लेखेर ती बालक एक्लै त्यति लामो दूरी पार गरेका हुन् ।आफूसँगै उनले एउटा झोला पनि बोकेका थिए । ती बालक दक्षिणपूर्वी युक्रेनको जापोरिज्जिया क्षेत्रका बासिन्दा भएको बताइएको छ ।
सो क्षेत्रमा रहेको एउटा आणविक केन्द्रलाई रुसी फौजले गत साता नि-यन्त्रणमा लिएको थियो । समाचार विवरणअनुसार विरामी आफन्तको हेरचाह गर्न उनका अभि-भावक युक्रेनमै बस्नु परेको थियो । आफ्नो अविस्मरणीय यात्रा पूरा ।
गरेको भन्दै उनलाई स्लोभाकियाली गृहमन्त्रालयले ‘पछिल्लो रातकोसबैभन्दा ठूलो नायक’ भनेको छ । विवरणअनुसार बाल ककी आमाले एउटा रेल चढाएर स्लो-भाकिया पठाएकी थिइन, जहाँ उनले आफ्ना नातेदार फेला पार्न सकुन् ।
उनीसँग एउटा प्लाष्टिकको झोला, पासपोर्ट र पट्टयाइएको नोटमा एउटा सन्देश लेखिएको थियो । ठेगानासहितको कागज लिएर स्लोभाकिया पुगेपछि सीमामा खटिएका अधिकारीहरुले राजधानी ब्रा-टिस्लाभामा रहेका उनका आफन्तजनहरुलाईसम्पर्क गर्न सहज भएको थियो ।
उनीहरुले लगत्तै त्यहाँ उनका आफन्तहरुलाई सुम्पि-दिएका थिए । छोराको हेरविचार गरेकोमा बालककी आमाले स्लोभाक सरकार र प्रहरीलाई धन्यबाद दिएकी छिन् ।स्लोभाकियाका गृहमन्त्रीले फेसबु कमा बालकबारे कमेन्ट गर्दै उनको ‘निडर र दृढता’को प्रशं-सा गरेका छन् ।
‘प्लास्टि-कको झोला, राहदानी र हातमा फोन नम्बर लेखेर उनी एक्लै आए, किनकी उनका अभिभा-वक युक्रेनमा बस्नुपर्ने थियो,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
Prevगाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच कुटाकुट भिडियो हेर्नुहोस
Nextएमसिसी पास गरेर सहि निर्णय लिएका छौ:माधव नेपाल
सिमानामा हतियार सहित पुग्याे शशस्त्र प्रहरी, भारतिय सेनाकाे भागाभाग, माेदी नै थर्कमान
महाभारतका भीम’ प्रविण कुमारको निधन दया छ भने Rip लेख्नुहोस
नेतालाई ‘धम्क्याउने’ एसपी पाण्डे निलम्बित !